Izindaba - Scoliosis
Kwabasha, ukunganaki empilweni kungaholela kalula kwi-scoliosis. I-Scoliosis yisifo esivame kakhulu ekukhubazekeni komgogodla, futhi ukuvela kwaso okujwayele kubhekise ekugoqeni komgogodla oseceleni okwedlula ama-10 degrees.
Yiziphi izizathu ezibangela i-scoliosis ebusheni? Kulo mbuzo, ake siqonde ndawonye, ​​ngiyethemba lezi zingeniso zingakusiza kuwe.
Izimbangela eziyinhloko ze-scoliosis zimi kanje:
1. Idiopathic scoliosis. Eqinisweni, kunezifo eziningi ze-idiopathic kwezokwelapha, kepha uhlobo lokungabaza olungatholi imbangela ethile lubizwa nge-idiopathic. Kungase kungabi nankinga ngemisipha futhi kungabi nezinkinga ngamathambo, kepha njengoba iziguli zikhula, i-scoliosis izokwenzeka;
2. I-Congenital scoliosis inobudlelwano obuthile nofuzo futhi imvamisa inomlando womndeni. Isibonelo, izehlakalo ze-scoliosis ezinganeni zabo zizokwanda uma abazali babo bene-scoliosis. Ngaphezu kwalokho, i-scoliosis ebangelwa imikhuhlane, imithi, noma ukuvezwa yimisebe ngesikhathi sokukhulelwa ibizwa ngokuthi yi-congenital scoliosis, evela ekuzalweni.
3. I-Scoliosis ibangelwa kakhulu yimisipha nezinzwa, okuvame kakhulu yi-neurofibromatosis, edalwa kakhulu ukungalingani kwemisipha okubangelwa ukukhula kwezinzwa;
4. Isakhiwo esihambisanayo sabhujiswa ngemuva kokuhlinzwa;
5. Ngenxa yokuphatha izikhwama zesikole isikhathi eside noma ukuma okungafanele.
Ngakho-ke kungahle kungabi namuzwa esigabeni sokuqala. Uma i-scoliosis itholakele, empeleni i-scoliosis enkulu kune-10 °, ngakho-ke i-scoliosis ingaletha ubuhlungu futhi idale ukuma okungajwayelekile. Isibonelo, ingane inamahlombe aphakeme futhi aphansi noma ukuthambekela kwe-pelvic noma imilenze emide nemifushane. Okubi kakhulu kuzodala ukungajwayelekile kokusebenza kwe-cardiopulmonary. Isibonelo, i-thoracic scoliosis ibucayi kakhulu, ezothinta ukusebenza kwe-cardiopulmonary. Izingane zizozwa ukuqina kwesifuba lapho zikhuphukela phezulu nangaphansi, okungukuthi, lapho zigijima. Ngoba i-thoracic scoliosis izothinta ukusebenza kwe-thorax ngokuzayo, umsebenzi wenhliziyo namaphaphu uzothinteka futhi nezimpawu zizobangelwa. Uma kukhona ijika eliseceleni elingaphezu kuka-40 °, izinga lejika eseceleni likhulu ngokwedlulele, okungadala ukukhubazeka okuthile. Ngakho-ke, i-scoliosis yentsha kufanele iphathwe ngenkuthalo futhi ivinjelwe uma isitholakele.